कसरी ठूलो पटक monotony, सौन्दर्य स्तर, विशिष्ट ढाँचाको र hackneyed cliches पारित गरेको छ! खैर, शायद पूर्ण गएका छैन, तर कुनै पनि मामला मा, यो सबै जान्छ। शब्द "फैशन" थप पुरानो बन्ने, जस्तै "राम्रो स्वाद" र "आफ्नै शैली" को रूपमा अवधारणाहरु तरिका दिने छ। पहिलेभन्दा मूल्य को विशिष्टताको।
यी प्रक्रियाहरू नयाँ प्रविधिहरू विकास लागि मात्र होइन उर्वर भूमि दिनुभएको छ, तर पनि मूल फर्कन। यो सिर्फ एक भूल पछिल्लो छ, र जातीय वस्त्र, सामान र गरगहना रचनात्मकता र कल्पना गर्न एक विशाल उडान दिनको - र यो छैन कि नयाँ। अन्य resurgent शैलीहरू साथ आज झन् लोकप्रिय अफ्रिकी। र आला यो वस्त्र, जूता र सहायक को क्षेत्र मा, तर पनि दोकान को कला मा मात्र होइन ओगटेको छ। अफ्रिकी बाल ठूलो गति मा ग्रह वरिपरि फैलाउने, लोकप्रियता बढ्छ।
दोकान मा अफ्रिकी सुविधाहरू
अफ्रीका - साँच्चै अद्वितीय महादेशमा। रंगीन स्क्रापहरू देखि एक सिलना जस्तै, त्यो उचित विकास दिनुभयो। उज्ज्वल रंग, प्राकृतिक कपडे, पाठ्यक्रम सजावट, अविश्वसनीय सजावट लागि आधारमा प्राकृतिक सामाग्री र, प्रसिद्ध tresses र हल्लाउँदै - यो सबै को लागि हामी अफ्रीका धन्यवाद।
जेनेटिक्स घाम अफ्रीका बाट आप्रवासी बीचमा विशेष Hairstyles को लोकप्रियता को लागि आफ्नो तर्क प्रदान गर्दछ। हो, खुलस्त, enviable बाल घनत्व र स्थायित्व, प्राकृतिक दोब्र्याइएको र चकलेट को तेजस्वी रंग - यो सबै केही राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको को जीन मा निहित छ। तर आज एफ्रो केश कुनै पनि व्यक्ति उपलब्ध गर्न सकिन्छ।
यसलाई निम्न सुविधाहरू द्वारा विशेषता छ:
कुनै पनि मोटाइ र संरचना थुक्नु;
जातीय शैली मा आभूषण को प्रयोग: seashells, काठ र माटो मोती;
प्राकृतिक रंग को predominance।
कुनै पनि मामला मा बाल कालो वा खैरो मा चित्रित हुनुपर्छ भनेर सोच्न छैन। उज्ज्वल रंग को अफ्रीकी शैली!
पहिलो र मुख्य यसलाई कर्ल उल्लेख लायक छ। सानो पर्म - बाल को सबै भन्दा साधारण फारम। एकै समयमा यो मात्र होइन उचित सेक्स, तर पनि मानिसहरू थकित छ। अफ्रिकी कपाल को बोल्ने एक सामान्य नियम, रूप, मालिकको धेरै सानो पर्म मनमा छ, बाल फ्लफी विशाल आम बनाउन।
शताब्दीयौंदेखि, अफ्रीकनहरु cornrow। आज को आधारमा महिला Hairstyles को एक विस्तृत विविधता बनाउन afrokosy। फोटोग्राफी कसरी स्टाइलिश र आधुनिक यसलाई हेर्न सक्छन् को एक अद्भुत उदाहरण हो।
आज, अफ्रिकी braids, सबैभन्दा लामो गर्न "कान" को टाउको आसन्न, हावा मा उडान को धेरै लोकप्रिय प्रकार। कहिलेकाहीं braids को अन्त्य सानो कर्ल संग पहनाया।
आज यो पहिलो braids बुनाई गर्न आविष्कार गर्दा र कसले निर्धारण गर्न गाह्रो छ। तर, ती भाषा बोल्ने, हामी अक्सर यो शैली मा Hairstyles बीचमा आफ्नो proliferation र लोकप्रियता जोड दिन्छ कि "अफ्रिकी braids" वा "afrokosy" को परिभाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
नयाँ आविष्कार, अक्सर कृत्रिम किसिमहरु को छन् जो, - विभिन्न thicknesses र लम्बाईहरू को flagella। तिनीहरू बाहिरबाट braids जस्तो, तर यस्ता अफ्रिकी कपाल निर्माण गर्न गाह्रो छ, यसलाई एक निश्चित कौशल आवश्यक छ। तपाईं ताराहरु गर्न निर्णय भने - भुक्तानी गर्न मास्टर भन्दा pigtails दिइएको थियो ठूलो छ तयार। सट्टा तीन दुई lobes को बन्डलहरूको गुना। व्यावहारिकता र कुनै तरिका कमसल braids मा braids संग अफ्रीकी Hairstyles को स्थायित्व।
धेरै शैलीहरू सम्बन्धित आज dreadlocks। तिनीहरूले खुशी साथ आज hippie रोजेको पटक विभिन्न उपसभ्यताहरू प्रतिनिधिको छन्। तर तपाईं मूल कुरा भने, अफ्रिकी प्रभाव अकाट्य छ। किन एउटा मात्र Bob Marley आफ्नो भव्य Hairstyles Rastamanskaya beret र सेतो-toothed मुस्कान आधा आफ्नो अनुहार मा छ!
एक पटक बुनाई dreadlocks एक मृत्यु वाक्य बाल हस्ताक्षर गर्न tantamount थियो। regrown dreads untwisting लगभग काल्पनिक पछि तिनीहरूलाई बहाल। कृत्रिम सामाग्री कि बाल राख्न अनुमति अब अक्सर प्रयोग गरिन्छ।
Dreads तस्बिरहरू जो को चमक र सुन्दरता असर महिला, को लागि Hairstyles को एक किसिम गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले मन सबै: Hairdressers विभिन्न तरिकामा तिनीहरूलाई देखो, सामना गरौं। र केही indecisive fashionistas छैन आफैलाई लागि यो केश प्रयास गर्न साहसी, dreadlocks को गोप्य प्रशंसक छन्। वास्तवमा, dreadlocks कुनै पनि रंग, कुनै पनि उमेर र लिङ्ग संग मानिसहरू हुन्।
Afropricheska आफ्नै हात
यो यति भनेर कट्टरपंथी परिवर्तन को लागि समय छैन आएको छ हुन्छ, तर प्राण नयाँ कुरा सोध्छन्। यो यस्तो अवस्थामा आवश्यक छ कि छैन भनेर, एक पर्म वा अझ यति संग प्रयोग - लट dreadlocks, plaits, braids संग? पक्कै, यी उपचार को प्रभाव लामो समय को लागि पछिल्लो हुनेछ, र मूल्य तिनीहरूले बरु ठूलो छ।
तपाईं अफ्रिकी शैली मा एक विषय पार्टी जाँदैछन् भने, वा छवि एक छुट्टी मा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, वैश्विक परिवर्तन तिर एक कदम उपस्थिति मा आवश्यक छैन लिन्छन्।
, भिजेको कपाल केही साना braids राति napletite मोम तिनीहरूलाई तेल, र बिहान राम्ररी किसिमहरु खोल्ने गर्न: पुरानो जमानाको तरिका प्रयोग गर्नुहोस्। यो केश एक तीन दिन देखि सिद्ध पकड छ।
एक बढाउन प्रभाव सिर्जना गर्न, तपाईंले सामान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न अफ्रिकी केश थप expressive र उज्जवल देख्यो, यो कृत्रिम नीरस वा धेरै बुनाई गर्न सम्भव छ। dreadlocks resembling यो विशेष बाल सामान, multicolored सूत्रहरू बाट बुना।
शैली जोड र जातीय डिजाइन, माटो, काठ, समुद्र गोले वा छाला बनेको barrettes गर्न सक्नुहुन्छ।
महिला adorning इतिहास Hairstyles
घर मा ड्राई शैंपू: व्यञ्जनहरु, कुकिङ प्रविधिहरू
श्रीलंका टर्नर: ठेगाना, फोटो, र समीक्षा। अनुसन्धान बाल हाडजोर्नी संस्थान सैनिक पछि नाम टर्नर
रेथिनन, क्रेते को सुसज्जित समुद्र तट: समीक्षा, सेवा
प्रकाश शिल्प कागज बाहिर: चित्र र फोटो। छोराछोरी संग कागज बाहिर शिल्प बनाउन सिक्न
नयाँ वर्ष म्याग्दीहरू आफ्नै हातबाट झण्डाहरू
कसरी बगैंचामा टाउको मा प्याज बढ्न सुझावहरूको
कसरी प्राप्त र गतिज रत्न प्रयोग गर्न: "Dota 2"
झिल्ली Tyvek: वर्णन, विशेषताहरु र आवेदन स्कोप